Faa Faahin: Dagaal Beeleedyo ka Qarxay Itoobiya | XOG-DOON NEWS - Breaking News From Somalia
Home Wararka Maanta Faa Faahin: Dagaal Beeleedyo ka Qarxay Itoobiya
Faa Faahin: Dagaal Beeleedyo ka Qarxay Itoobiya
Seddexdi maalmood ee la soo dhaafay dagaal beeleedyo deegaanna kala duwan ka dhacay ayaa lagu tilmaamay iney dalku sarreynta sharciga si buuxda uga saldhigan.
Fiidnimadi Axadda magaalada shaashamanne dhalinyarada magaalada waxay tiirka korontada ku daldaleen wiil dhalinyarada ah oo ay ku sheegeen inuu bam sitay.
Magaalada Hawaasa iyo Asoosa dad si gaar ah qowmiyad ahaan looga beegsaday ayaa dhagax iyo baangado lagu dilay meydkoodana la waray laamiyada magaalooyinka iyada oo ay ku dhinteen dad aan ka yareeyn 32 qof, Hantida la gubay, la dhacy ama la boobay tira laguma soo koobi karo.
Previous articleOgoow Magaca: Magaalo biyo qaadi rabaan.
Next articleErdogan” Maraykanku Dhabarka ayuu naga toogtay